Ngubani owabona iprofayile yam kwi-Instagram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ngubani obone iprofayile yam kwi-Instagram?
Juni 22, 2019 0 IiCententarios 2545
Uninzi lwethu i-Instagram lukwazile ukusivelisa, kakhulu kangangokuba sabelana ngobomi bethu abaninzi kweliqonga lezentlalo kwaye yiyo loo nto, Umdla ukwaziwa ngubani owabona iprofayile yam ye-Instagram. Nokuba uyayazi na ukuba ngubani osigreyayo, okanye ukuba unayo i-akhawunti yeshishini, bangaphi abantu abajonga iimveliso zethu.
Kodwa ngokungafaniyo nezimvo "Ndiyathanda" ukuba abanye abantu bakushiye kwaye babonakala kulo naluphi na upapasho lwakho, ukubona ukuba ngubani otyelele iprofayile yakho kunzima ngakumbi. Ngapha koko, unokucetyiswa ngeendlela ezininzi ze-intanethi okanye ii -apps, nangona kunjalo, Nokuba ufuna ntoni na, awufumani sisombululo. Kuba uninzi lweengcebiso oye wakwazi ukuziva aziyiyo into ngaphandle kwamaqhinga okufumana itikiti lewebhu.
Kwiimeko ezininzi ezi zicelo okanye amaqhinga zii-facades zabenzi be-cyber ujonge ukugcwalisa isixhobo sakho isoftwe kwaye ke ukwazi ukubela ulwazi kunye neefoto kwiselula yakho. Ngezi zizathu sinomdla wokukunika elona cebiso lilungileyo malunga nokuba ngubani owabona iprofayili yam kwi-Instagram kwaye unqande ekubeni ngumntu omnye kuluhlu.
Sukusebenzisa ezi zicelo ukwazi ukuba ngubani owabona iprofayile yam kwi-Instagram
Siyazi ukuba sonke singathanda ukufikelela kwisicelo esisixelayo esabona iprofayile yethu, kodwa oku akunakwenzeka, Akukho namnye onokubonisa ukuba ngubani owayibonileyo.
Onke la maphepha kunye nezicelo ezithembisa ukuba luncedo ukwazi ukuba ngubani owabona iprofayile yam kwi-Instagram, kukudana ngokupheleleyo, akukho nanye ehlangabezana nemisebenzi ebonisiweyo kunye nokubonisa iqhosha.
Eli phepha likunika ulwazi malunga nabo bakuvimba kunye nakwabo bakuyekisileyo ukukulandela simahla ngaphandle kokucela ulwazi lomntu. Kwakhona ngaphakathi kwemisebenzi yayo kukho uhlalutyo lopapasho lwakho ngendlela ekumgangatho wokulawulwa Ngokusekwe kwezona bafumene ezona "zithandwayo", kunye nezimvo.
Unokubona iifoto zabucala zabalandeli bakho kwaye wazi xa abanye abasebenzisi bekho kwi-intanethi. Nangona kunjalo, nangona ibonelela ngokhetho lokwazi ukuba ngubani ojonga iprofayile yakho, lo msebenzi uqinisekisiwe ukuba awusebenzi.
Sisicelo somgibe kwabo basebenzisa inkqubo yokusebenza ye-iOS, Yathandwa kakhulu xa yayiqala ukuphuma njengesisombululo sokufumanisa ukuba ngubani obone iprofayile yam ye-Instagram, kodwa njengoko yayinyuka, yangena phantsi xa kufunyaniswa ukuba bubuqhetseba ngokupheleleyo kwaye yasuswa ngokukhawuleza kwi "App Store".
Nangona kunjalo, umphuhlisi wayo u-Turker Bayram emva koko wenza isicelo esilandelayo esifumaneka kwi-injini yokukhangela yeGoogle.
Undijonge njani kwi-Instagram
Imisebenzi yayo ifana kakhulu nale yangaphambili sele ikhankanyiwe, ngumahluko lowo Ijolise kwizixhobo ze-Android kwiGoogle Play.
Esi sicelo sisebenza ngendlela esenza iqonga elilinganayo nele-Instagram kunye nabasebenzisi kwaye lenze abasebenzisi bakholelwe ukuba bayangena, xa benokwalathisa idatha yabo ngqo kwiseva eyilelwe ukunaba ulwazi.
Esi sicelo senziwa zombini i-iOS kunye ne-Android, kunye nabasebenzisi bayo kukhangelo Fumana isisombululo sokuba ngubani ongayibona iprofayile yakho, babe ngamaxhoba eqonga lobuqhetseba. Ngapha koko, kuye kwaqinisekiswa ukuba le seva intshontsha amaphasiwedi kwaye iphinde ibuyele kwenye engaziwayo.
Emva kwezikhalazo ezininzi ngabo baye bayikhuphela, kwafunyaniswa ukuba iyasetyenziswa ukupapasha iifoto ezingafanelekanga nokuba zazingagunyaziswanga zaze zathunyelwa. ispemu.
Inxalenye elungileyo yako konke oku kukuba ezi zicelo Basuswe kwiivenkile zokuhamba kunye injini yokukhangela kaGoogle. Nangona kunjalo, abaqulunqi be isoftwe Bahlala besenza imigibe engakumbi yokutsiba ulwazi lwabantu kwaye bafanele idatha yabo.
Kwaye nangona ezi zicelo zinobomi obufutshane, ngexesha lokufumanisa ukuba bubuqhetseba, abantu abaninzi babengamaxhoba enkohliso yabo. Ngesi sizathu, siza kukubonisa apha ngezantsi ukuba kufuneka wenze ntoni xa ukhuphela nayiphi na kuzo.
Ingcebiso kwimeko yokuba ukhuphele nasiphi na isicelo
Kwimeko apho sele usifakile isicelo ebendikhe ndathetha ngaso ngaphambili, ungaqaphela naziphi na kwezi ngxaki zilandelayo:
Xa usebenzisa iGoogle ifowuni yakho iqala ukwehla.
Ifowuni yakho ephathekayo icima ngamanye amaxesha ngaphandle kwengcaciso.
Unobunzima xa ungena kwi-Instagram.
Ayizamkeli izithuba ezininzi ozenzileyo kwiprofayile yakho.
Ukuba nayiphi na kwezi ngxaki yenzeka kuwe, sicebisa ukuba ungene kwi-Instagram ngegama lokugqitha lokugqibela olisebenzisileyo, Ukuba awukwazi ukuyenza, bacele ukuba bakuthumelele i-imeyile yokubuyisela iphasiwedi kwaye uyitshintshe.
Ukuba ukrokrela isicelo, eyona nto inengqondo kukusikhupha njengesiqhelo. Emva koko, tshintsha yonke iphasiwedi yamaphepha kunye neeseva oya kuba uyisebenzise kwiselfowuni yakho ngexesha ufake isicelo sobuqhetseba.
Xa utshintsha iphasiwedi kwi-Instagram kufuneka uye kwicandelo elithethayo "Hlela inkangeleko" kwaye ukhethe ukhetho lwe "Guqula iphasiwedi", Kuya kufuneka ubhale le onayo ngoku kwaye uyitshintshe ibe entsha. Ngale ndlela ubuyisela ukhuseleko lweakhawunti yakho.
Zeziphi ezinye iindlela endinokuzisebenzisa ukufumana ukuba ngubani owabona iprofayile yam ye-Instagram?
Kukho ukhetho oluninzi kwaye izicelo ezikuvumela ukuba uhlaziye iakhawunti yakho kwaye ikhuselekile kunabo abathi bayazi ukuba ngubani obona iprofayile yakho. Kananjalo phakathi kwemisebenzi enawo la maqonga kukwazisa ngokulandela okulandelanayo, ngubani oqalayo okanye oyekayo ukulandela, yeyiphi eyona nto ithandwa kakhulu, wagqabaza kwaye wajonga iimpapasho kwaye ngale ndlela uyazi ukuba ziziphi iimpembelelo ezinike zona kubaphulaphuli bakho. Ezinye zazo zezi:
Ungazi njani ukuba ngubani owabona iprofayile yam kwi-Instagram?
Ngokucacileyo akunakwenzeka ukuba wazi ukuba ngubani ojonga iprofayile yakho kule nethiwekhi yentlalo, nangona kunjalo, i-Instagram ikunika amaqhinga okufumana abanye abasebenzisi abaye badlula kuyo.
Olona khetho lubonakalayo, kuba kweli candelo uya kwazi ukuba ngubani oqale ukukulandela, kwaye ke loo mntu wayibona iprofayile yakho ngaphambi kokwenza isigqibo.
Like kunye nezimvo
Olu lolunye ukhetho lusisiseko kakhulu, lumalunga nokwazi abasebenzisi bokugqibela abanike u- "like" okanye ushiye uluvo kumxholo othile oyilayishile. Ngapha koko, kukho abantu abangazikhathazi "njeng" nezithuba ezindala, Ngale ndlela unokubona ukuba ngubani ojonga iprofayile yakho.
Obu bucukubhetyebhetye buyanda ngakumbi, kodwa kuya kufuneka ugcine engqondweni ukuba Yidatha eya kususwa emva kweeyure ezingama-24, ke kuya kufuneka ukhawuleze. Ngale ndlela, yenye yezona ndlela zingenakungqineka zokwazi ukuba ngubani obona iprofayili yakho ngaphandle kokushiya umkhondo okanye umkhondo, oko kukuthi, awukulandela okanye unxibelelane nawe.
Icebo elinalo msebenzi ukulayisha ubuncinci iposti enye ngosuku ukuze xa ufuna ukwazi ukuba ngubani omile kwiprofayile yakho, unokujonga kwakhona amanani. Kwaye ukufezekisa oku, kufuneka uye kwibali olilayisheyo, tyibilika ibha kwaye iya kukubonisa uluhlu lwababukeli. Ukongeza kwabo bangalandeli, ukhetho oza kulilandela luya kubonakala ecaleni kwabo.
Esi sicelo sikunika ulwazi oluxabisekileyo njengenani lilonke labalandeli. Nangona lo msebenzi ungakuniki igama elichanekileyo labasebenzisi, ukuba unikezela ngezixeko okanye amazwe axhumene kuwo, ubudala, isini esiphambili kunye neentsuku apho besebenza kakhulu, lonke olu lwazi lukhutshiwe kubaphulaphuli.
Njengoko besinixelele ekuqaleni, Ayikho indlela egqibeleleyo yokwazi ukuba ngubani onokubona iprofayili yakho kwaye angadibani nawe. Kuyacetyiswa ukuba ulandele ezinye zeengcebiso esikuxelele zona.
Ngenxa yokuba ulwazi lwakho lomntu onokuba nalo kwi-Instagram yakho lunokusetyenziselwa izinto ezimbi ezinokukuchaphazela, oku kunokwenzeka ukuba ukhuphele kwaye ufake nayiphi na imisebenzi yobuqhetseba esichaze ngasentla.
Zininzi iimeko zokuxhatshazwa kwe-cyber eziphele kakubi kakhulu, ukuqala ngokwenza ukonakalisa igama lomntu, nokwenza ubugebenga ukufumana idatha yabucala. Ngayiphi na imeko, ayikukuthatha kancinci ukuba ungoyena ulixhoba.
Eyona ndlela ilungileyo yokwazi ukuba ngubani owabona iprofayili yam kwaye kucacile ukuba Ukulandela ukhetho olunokunikezelwa yinethiwekhi ye-Instagram, kuba ngale ndlela lonke ulwazi luya kukhuseleka. Ngapha koko, akukho sidingo sokubeka idatha eyongezelelweyo enokuthi ikrokre. Iqonga linoxanduva lokugcina uhlengahlengiso nabo bafuna ukucacisa amathandabuzo, kodwa nabo bakhusele bonke abantu abathi ngandlel 'ithile bangahlali bengazi okanye bahambe kwiprofayile yakho ngalo naliphi na ithuba. Kuzo naziphi na kwezi meko i-Instagram ijolise ekuhlangabezaneni nayo yonke imfuno yabo bonke abasebenzisi bayo.
1 Sukusebenzisa ezi zicelo ukwazi ukuba ngubani owabona iprofayile yam kwi-Instagram
1.2 Ndiza kufaka
1.3 Undijonge njani kwi-Instagram
2 Ingcebiso kwimeko yokuba ukhuphele nasiphi na isicelo
2.1 Khupha isicelo
3 Zeziphi ezinye iindlela endinokuzisebenzisa ukufumana ukuba ngubani owabona iprofayile yam ye-Instagram?
4 Ungazi njani ukuba ngubani owabona iprofayile yam kwi-Instagram?
4.2 Like kunye nezimvo
4.3 Ukubonakala kwebali
Dibana nemidlalo efanelekileyo xa unesithukuthezi